weydaarsiga crypto Korean bilaabaan is dadaal sharciyeynta - Blockchain News
weydaarsiga cryptocurrency waaweyn Korea ee qotomiyey xeerarka si kor loogu qaado daahfurnaanta.
Shir jaraa'id ku Seoul on Tuesday, madaxda 14 weydaarsiga crypto qoyska oo ay ku jiraan Bithumb, Upbit iyo OKCoin dhawaaqay xeerarka. Waxay xubno ka mid ah Blockchain Association Korea waa.
Ururku wuxuu kormeeri doonaa nidaam ka mid ah 14 is-weydaarsiga iyo sagaal ku cusub si ay u arkaan haddii ay nidaamyada ay la kulanto xeerarka. Si kastaba ha ahaatee kormeerka ku yeelan karto saamayn xadidan sababtoo ah xeerarka aan sharci ahaan ku qabanaya.
Xubnaha la filayo in ururka soo gudbiyaan warar is-kormeerka by May 8th. Dhinaceeda, ururka bilaabi doonaan in ay kormeer xubnaha laga bilaabo 1-dii May.
“Sharciyadu waa kuwo shuruudaha aasaasiga ah si loo hubiyo in xawaalad crypto hufan,” ayaa sheegay in si rasmi ah urur.
Coincheck dhawaaqay celinta bilaabaan isbuuca soo socda
cryptocurre Japan ...
amaahiya Cryptocurrency Blockfi kicisaa $ 1.55M in maalgelinta
bilowga New York ku salaysan ...
Post Previous:patent Amazon files crypto la xidhiidha durdurrada xogta
Post Next:Seeraar ATM network Coinsource la Acuant-factor multi authenticator u shaqeeyo
dlino ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 20, 2018 at 5:51 PM